Mamy Ravatomanga : Manadio tena mafy -
AccueilRaharaham-pirenenaMamy Ravatomanga : Manadio tena mafy
21/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mandeha ary tsy miverin-dalana ny raharaha mikasika an’i Mamy Ravatomanga eny amin’ny Fitsarana any Frantsa. Efa nambara teto fa nogiazan’ny PNF (parquet national financier) ireo trano miisa efatra any Levallois Perret, ny volana Jona lasa teo….
Nanaitra ny mpanara-baovao tokoa ny fandiovan-tena tsy misy fitsaharana nataon’i Mamy Ravatomanga tamin’ny alalan’ireo gazetiny tato ho ato. Nasiany tsindrim-peo manokana tamin’ireo lahatsoratra fa tsy nanondrana, ary tsy voarohirohy amin’ny fanondranana « bois de rose », tsy nanodinkodim-bolam-panjakana, na koa nanadio vola maloto ny tenany nandritra ny Tetezamita, ary tsy misy raharaha maha voarohirohy azy mihitsy, na eto an-toerana, na any ivelany.
Mpandainga daholo izany ireo hainoamanjery maro hatrany ivelany izay miresaka ilay raharaha famotsiam-bola sy fividianana harena tamin’ny fomba tsy mazava manodidina an’i Parisy, izay efa eo am-pelatanan’ny PNF (parquet national financier). Nandany fotoana fotsiny izany ny iraky ny Fampanoavana frantsay nanao fisavana ny orinasa SODIAT sy ny trano fonenan’i Mamy Ravatomanga, niaraka tamin’ny lehiben’ny Fampanoavana tetsy Anosy sy ny SAMIFIN.
Nataon’ny mpitondra HAT ampihimamba avokoa ireo orinasam-panjakana goavana rehetra nandritra ny Tetezamita: JIRAMA, Air Madagascar, sns. Mambra tao anatin’ny filankevi-pitantanan’ireo orinasam-panjakana roa lehibe ireo i Mamy Ravatomanga nandritra ny dimy taona nahateo amin’ny fitondrana an’i Andry Rajoelina. Tsy nety tafavoaka tao anaty lisitra B mihitsy ny kaompania Air Madagascar, nampirina tanaty kizo tamin’ny fiaramanidina Airbus tamin’ny hofany, izay tena midangana tokoa tsy hitondra tombontsoa velively. Toraka izany koa ny orisana JIRAMA izay nasaina nanofa « groupe électrogène » amina miliara (efa eny amin’ny Bianco moa ny mikasika io raharaha io, saingy…).
Raha tsorina ny resaka dia nentina nampidiram-bola ho an’i Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina ireo orinasam-panjakana natao ampihimamba nandritra ny Tetezamita. Iaraha-mahita ny fahavoazana navelan’izy ireo teo amin’ny JIRAMA sy ny Air Madagascar, ka nahatonga ny mpitantana vaovao tao amin’ity kaompania ity nampitsahatra ny fanofana ireo fiaramanidina Airbus. Nataon’ny mpitondra HAT mihitsy ny fomba rehetra tsy nivoahan’ny kaompania Air Madagascar tao anatin’ny lisitra B mba nahafahan’izy ireo nitsentsitra tao. Efa tany amin’ny volana Jona 2016 vao tafavoaka tamin’izany lisitra B izany ny kaompania.
Lasan’i Mamy Ravatomanga ihany koa ny orinasa MADARAIL raha vao tafapetraka ny fitondrana Tetezamita. Iaraha-mahita anefa ankehitriny fa tsy misy fotodrafitrasa mitsangana na iray aza. Nitera-doza mihitsy moa izany farany teo, ka namoizana ain’olona vokatry ny fivadihan’ny fiaran-dalamby. Nataon’i Mamy Ravatomanga ny fomba rehetra izay nahazoana ny MADARAIL, mba namadihana ho vola be amina miliara ireo tany sy fananan’ity orinasan-dalamby ity.
Fiverenana eo amin’ny fahefana
Mitodi-damosina amin’ny mpanongam-panjakana avokoa ireo firenen-dehibe rehetra toa an’i Lafrantsa, Etazonia ary ireo rafitra ara-bola iraisam-pirenena toa ny Banky Iraisam-pirenena sy ny FMI. Tsy misy afa-tsy i Mamy Ravatomanga no mamatsy vola an’i Andry Rajoelina amin’izao fifidianana izao. Ny fiverenan’i Andry Rajoelina eo amin’ny fahefana hanoneran-dRavatomanga ny lany nandritra izay efatra taona izay no antony tsotra nilatsahan’ity “putschiste” ity fa tsy misy resaka fitiavan-tanindrazana izany velively. Izay rahateo koa no ao ambadik’izao fandiovan-tena mafy ataon’i Mamy Ravatomanga amin’ny alalan’ireo gazetiny. (Hitohy…).